Gaana 10 sano waxaa ka furnaa safaarad Maraykan oo been abuur ah - iftineducation.com
iftineducation.com – Si dagdag ah ayey dunida oo dhan u gaartay akhbaarta ku saabsan burcad abaabulan oo fadhigoodu yahay Gaana oo maamulayey safaarad been abuur ah oo samaynaysay dal-ku-galka Maraykanka oo sax ah.
6,000 oo Doollar ayaa dal-ku-gal kasta lagu samaynayey muddo toban sano ah.
Safaaradda been abuurka ah waxaa maamulayey kooxo isku xiran oo u dhashay Gaana iyo Turkiga, waxaana surnaa calanka Maraykanka iyo masawirka madaxweyne Obama.
Waaxda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa tilmaan faahfaahsan ka bixisay sida dadka loo khiyaanay.
“Safaaradda beenta ah ma aysan ogolayn in dadku iska soo galaan. Taa beddelkeeda waxay dadka ka keeni jireen ilaa iyo dhulka durugsan ee galbeedka Afrika. Waxay macaamiishooda u soo qaadi jireen Accra ayagoo hotel u dhow dejin jiray. Dambiilayaasha Gaana u dhashay dadka ayey keeni jireen oo ka kaxayn jireen safaaradda beenta ah” ayey tiri waaxdu.
Waxay kaloo sheegay in kooxdaas isku xiran ay laaluushi jireen saraakiil caado-qaateyaal ah. Ilaa dhowr qof ayey dawladda Maraykanku sheegtay in arrintaas loo xiray.
Dal-ku-gal aan laga garanaynin kan saxda ah
Waaxda arrimaha dibadda waxay intaa ku dartay in safaarad beenaadaas ay dadka siin jirtay dal-ku-galka Maraykanka oo sax ah, kaasoo si qayrul-sharci ah lagu helay.
Hawshaas waxay sheegtay inay fududeeyeen saraakiil laaluush qaatay oo bixiyey dukumentiyo aysan waxba ku oollin si wax loogu qoro.